As of Wed, 03 Jun, 2020 22:55
डेढ सय टन चिनी नेपालगन्ज भन्सारमै
भारतबाट आयात गर्न खोजेको करिब डेढ सय मेट्रिक टन चिनी तीन सातादेखि नेपालगन्ज भन्सारमै रोकिएको छ । सरकारले भारतबाट चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सो चिनी तीन साता अघिदेखि नेपालगन्ज भन्सारमा रोकिएको हो ।
दुर्गमको सहकारीमा करोड बढी कारोबार
दुई दशक अघिसम्म घरखर्चदेखि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न साहुकै हात थाप्नु पथ्र्याे । चर्काे ब्याजको भारले थिचिँदै जीवन निर्वाह गर्नु तेह्रथुमको पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुनै नौलो कुरा थिए ।
तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमको साँचो सिंहदरबारमा
संविधानतः विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि संघीय सरकारले केही कार्यक्रमको ताला चाबी (साँचो) भने आफूसँगै राखेको छ । यसको उदाहरण तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम(टिएमपिपि) कार्यक्रम हो ।
खर्च विवरण नबुझाएका बाँकेका चार स्थानीय तहको बजेट निकासा रोक्का भएको छ । गत आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बिति सक्दा समेत जिल्लाका चार स्थानीय तहले खर्च विवरण नपठाएपछि कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकाको बजेट रोक्का गरिएको छ ।
बिहिवार, कार्तिक १, २०७५
अप्राकृतिक मुल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ : बडाल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य केशब बडालले सरकारको ७ महिने कार्यकालको बचाउ गर्दै अप्राकृतिक मुल्यवृद्धि यदि भएको छ भने सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले महङ्गी र कालोबजारी रोक्न सकेन: चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले प्रभावकारी कामगर्न नसकेको आरोप लगाउँदै केसीले महङ्गी र कालोबजारी रोक्न नसकेको सरकारले रेल र पानीजहाजको सपना बाँडेर अलमल्याएको पनि आरोप लगाए ।
नेपाल आयल निगमले तत्काल इन्धनको मूल्य नबढाउने भएको छ । निगमले चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई लक्षित गरेर इन्धनको मूल्य नबढाउने भएको हो ।
भेडा–च्याङ्ग्रा २४ देखि २९ हजारसम्म
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङबाट ल्याइएका भेडा–च्याङ्गा पोखरामा बिक्री वितरण सुरु भएको छ । दसैं पर्वलाई लक्षित गरी व्यापारीले केही दिनअघि नै भेडा–च्याङ्ग्रा भित्र्याए पनि शनिबारदेखि बिक्री वितरण गर्न थालेका हुन् । पोखराको याम्दीमा भेडा–च्याङ्ग्रा किन्नेहरूको भीड लागेको छ ।
दिगो विकासका लागि प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण आवश्यक
भूकम्प, बाढीपहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरी नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्ने विज्ञले बताएका छन् । नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान प्राकृतिक प्रकोपजन्य क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन् । नेपालले विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने पुँजी स–साना प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च गर्नु परेका कारण द्रुत विकास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मूल्य नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तराष्ट्रिय व्यापारयुद्धले नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । इण्डोनोसियाको बालीमा शनिबारदेखि सुरु भएको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी मन्त्री डा. खतिवडाले विश्वमा हाल देखा परेको व्यापारयुद्धको अवस्थाले नेपालजस्ता साना मुलुकहरूको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
पोखरामा ४ अर्ब नयाँ नोट साटियो
नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी र शुभदिपावलीका अवसरमा पोखरामा हालसम्म ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका नयाँ नोट साटिएको छ । पोखराबाट हालसम्म ४ अर्बभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं आम नागरिकलाई नयाँ नोट साटिएको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशक पोमनाथ गौतमले बताए ।
घाँस बिक्रीबाट वार्षिक १३ लाख आम्दानी
सल्यानका कृषक पछिल्लो समय घाँसखेतीतर्फ आर्कषित भएका छन् । परम्परागत रूपमा गरिने कृषि पेसाभन्दा घाँस खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि कृषकहरू व्यावसायिक घाँस खेतीतर्फ आर्कषित भएका हुन् ।
खसी प्रतिकेजी पाँच सय र च्याङ्ग्रा सात सय रूपैयाँ
नेपाल खाद्य संस्थानले खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ । संस्थानले शुक्रबारदेखि खसीबोका र च्याङ्गाको बिक्री खुला गरेको छ । संस्थानले खसी प्रतिकेजी पाँच सय र च्याङ्ग्रा प्रतिकेजी सात सय रूपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । संस्थानले प्रतिकेजीमा १० रूपैयाँ छुट दिएको हो । संस्थानले बिहीबार पाँच सय च्याङ्ग्रा र २ सय ७१ वटा खसीबोका भित्र्याएको छ ।